Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण माथिल्लो तामाकोसी अन्तिम चरणमा, असारभित्रै १५२ मेगावाट बिजुली
माथिल्लो तामाकोसी अन्तिम चरणमा, असारभित्रै १५२ मेगावाट बिजुली
१२ असार २०७८, शनिबार १६:४२
काठमाडौँ, १२ असार । रमेश लम्साल । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै, हाल दोस्रो युनिटको पनि परीक्षणको काम भइरहेको छ । सो युनिटको समेत काम सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली जोड्न लागिएको हो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण सुरु भएको झन्डै १० वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको हो । प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेकन समस्यासँग जुध्दै स्वदेशी लगानीकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्गृहबाट आएको २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनलाई न्यु खिम्तीमा रहेको सबस्टेसनमा जोड्न लागिएको छ । “तामाकोसी करिडोरबाट आएको प्रसारणलाइनको बिजुली न्यु खिम्ती सबस्टेसनमा जोडिने भएको छ, सोही सबस्टेसनबाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ,” डा. न्यौपानेले भने । यसअघि, बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनमा जोड्ने तयारी थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले आज एक सूचनामार्फत राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम भएकाले खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन बन्द हुने जानकारी गराएको छ ।
सो अवस्थामा प्रणालीमा विद्युत् अपुग हुने भएकाले ढल्केबरदेखि कोहरपुरसम्मका सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने क्षेत्रका औद्योगिक ग्राहकको छोटो समयका लागि विद्युत् कटौती हुुन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयको पानी प्रयोग गरी यथाशक्य विद्युत् कटौतीको समय कम गर्न प्रयास गरिने र औद्योगिक ग्राहकलाई पर्ने समस्या तथा असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा समेत मागेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङमा पानी हालेर हाल पनि परीक्षणलगायत काम भइरहेको छ । आयोजनामा कुल ६ युनिट रहेका छन् । स्वदेशी लगानीको ठूलो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा अनेकन आशंका पैदा भएका थिए । सरकारले सबै खालका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोनालगायत कारण पछाडि धकेलिँदै आएको थियो ।
आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत आयोजनाले पैदा गरेको छ । सुरुवाती लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको भए पनि अमेरिकी डलरमा आएको उतार–चढाव, ब्याजलगायत कारण लागत भने बढेर झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ ।
सबैको साथ र सहयोगका कारण माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आयोजनाले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । रासस